Ozinina - Chengdu Hemeikaieng Medical Equipment Co., Ltd.
Ny orinasanay dia mampihatra tanteraka ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001 sy ny rafitra kalitaon'ny fitaovana ara-pitsaboana ISO13485, ary manatanteraka fanaraha-maso telo amin'ny famokarana: fanaraha-maso ny akora manta, fanaraha-maso ny dingana ary fisafoana orinasa;Ny fepetra toy ny fanaraha-maso ny tena, ny fifampidinihana ary ny fisafoana manokana dia raisina mandritra ny famokarana sy ny fihodinana mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra.Ataovy azo antoka fa voarara tsy hivoaka ny orinasa ny vokatra tsy manara-penitra.Mandamina ny famokarana sy ny fanaterana vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpampiasa sy ny fenitra nasionaly mifandraika amin'izany, ary miantoka fa ny vokatra omena dia vokatra vaovao sy tsy ampiasaina, ary vita amin'ny akora sy teknolojia avo lenta mifanaraka amin'izany mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra, ny fepetra arahana ary ny fahombiazany.Taterina araka ny tokony ho izy ny entana.
Politika momba ny kalitao, Tanjona momba ny kalitao, fanoloran-tena
mpanjifa voalohany;kalitao voalohany, fanaraha-maso hentitra ny dingana fanaraha-maso, mba hamoronana marika kilasy voalohany.
Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia mahatratra 100%;mahatratra 100% ny tahan'ny fanaterana ara-potoana;ny hevitry ny mpanjifa dia voahodina ary 100%.
Mba hifehezana amin'ny fomba mahomby ireo lafin-javatra izay misy fiantraikany amin'ny teknolojian'ny vokatra, ny fitantanana ary ny mpiasa, ary hisorohana sy hanafoanana ny vokatra tsy manara-penitra, ny orinasa dia nanomana sy namorona rafitra rafitra antontan-taratasy momba ny kalitao ary nampihatra azy ireo mba hiantohana ny fiantohana ny kalitao.Mitohy miasa ny rafitra.
Fanaraha-maso ny famolavolana
Manomana sy manatanteraka ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny vokatra mifanaraka amin'ny programa fanaraha-maso ny famolavolana mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia mahafeno ny fenitra nasionaly sy ny fepetra takian'ny mpampiasa.
Mba hitazonana ny fahamendrehana, ny fahamarinany, ny fitoviana ary ny fahombiazan'ny antontan-taratasy sy fitaovana rehetra mifandraika amin'ny kalitaon'ny orinasa, ary mba hisorohana ny fampiasana ireo antontan-taratasy tsy manan-kery, ny orinasa dia manara-maso hentitra ny antontan-taratasy sy ny fitaovana.
Mba hahafeno ny fepetra takian'ny kalitaon'ny vokatra farany an'ny orinasa, ny orinasa dia manara-maso hentitra ny fividianana akora manta sy fanampiny ary kojakoja ivelany.Araho hentitra ny fanamarinana ny kalitaon'ny mpamatsy sy ny fomba fividianana.
Mba hisorohana ny akora manta sy fanampiny, ny ampahany novidina, ny vokatra semi-vita ary ny vokatra vita tsy hifangaro amin'ny famokarana sy ny fivezivezena, ny orinasa dia nametraka ny fomba famantarana ny vokatra.Rehefa voafaritra ny fepetra takian'ny traceability, ny vokatra na andiana vokatra tsirairay dia tokony ho fantarina manokana.
Ny orinasa dia mifehy tsara ny dingana tsirairay izay misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra amin'ny fizotran'ny famokarana mba hahazoana antoka fa ny vokatra farany dia mahafeno ny fepetra voafaritra.
Mba hanamarinana raha mahafeno ny fepetra voafaritra ny singa tsirairay ao amin'ny fizotran'ny famokarana, dia voafaritra ny fepetra fanaraha-maso sy fitsapana, ary tsy maintsy tazonina ny firaketana.
Mba hiantohana ny fahamarinan'ny fisafoana sy ny fandrefesana ary ny maha-azo itokiana ny sandany, ary mahafeno ny fepetra takian'ny famokarana, ny orinasa dia mamaritra fa ny fitaovana fanaraha-maso sy fandrefesana dia tokony hofehezina sy hojerena.Ary ny fanamboarana araka ny fitsipika.
Tafiditra ao anatin’ny lafiny rehetra amin’ny HMKN ny fanentanana momba ny kalitao
Ny ekipan'ny fanaraha-maso kalitao za-draharaha dia manaraka ny fenitra fanaraha-maso indostrialy avo indrindra amin'ny IQC, IPQC ary OQC mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra.
Mba hisorohana ny famoahana, fampiasana ary fanaterana vokatra tsy manara-penitra, ny orinasa dia manana fitsipika henjana momba ny fitantanana, ny fitokanana ary ny fitsaboana ireo vokatra tsy manara-penitra.
Fepetra fanitsiana sy fisorohana
Mba hanesorana ireo anton-javatra tena izy na mety tsy mahafeno fepetra, ny orinasa dia mametraka hentitra ny fepetra fanitsiana sy fisorohana.
Fitaterana, fitahirizana, fonosana, fiarovana ary fanaterana
Mba hiantohana ny kalitaon'ny fividianana vahiny sy ny vokatra vita, ny orinasa dia namolavola antontan-taratasy hentitra sy rafitra ho an'ny fanodinana, fitahirizana, famonosana, fiarovana ary fanaterana, ary nifehy azy ireo.